टि–२० सिरिजः भारतविरुद्ध वेस्ट इन्डिजको टिम घोषणा, को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
टि–२० सिरिजः भारतविरुद्ध वेस्ट इन्डिजको टिम घोषणा, को–कोले पाए मौका?
काठमाडौं, साउन ७ । भारत विरुद्धको टि–२० सिरिजका लागि वेस्ट इन्डिजले आज टिम घोषणा गरेको छ । वेस्ट इन्डिज क्रिकेट बोर्डले कार्लोस ब्राथवेटको कप्तानीमा २ टि–२० खेलका लागि १४ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो ।
१४ खेलाडी भित्र अनुभवी अलराउन्डर किरण पोलार्ड र सुनिल नारायण पनि अटाएका छन् । सुनिल ३ वर्षपछि टि–२० का लागि टिममा फर्किएका हुन् । उनले अन्तिम टि–२० खेल २०१६ मा इंग्ल्याण्डविरुद्ध खेलेका थिए । यस्तै पोलार्ड अन्तिम टि–२० खेल २०१८ मा भारतविरुद्ध खेलेका थिए ।
क्रिस गेल भने भारतसँगको टि–२० सिरिजमा देख्न पाइने छैन । उनी क्यानडाको ग्लोबल टि–२० लिगमा भएकाले टिममा उपलब्ध नभएको हुनसक्ने बताइएको छ । भारतले भने २१ जूलाई नै तिनै फम्र्याटका लागि टिम घोषणा गरिसकेको छ ।
वेस्ट इन्डिजको टोलीः कार्लोस ब्रार्थवेट (कप्तान) जन क्याम्बील, इभन लुइस, शिमरन हिटमायर, निकोलस पूरन, किरण पोलार्ड, रमन पावेल, कीमो पल, सुनील नारायाण, शेल्डन कट्रेल, ओशाने थमस, एन्थोनी ब्रिम्ले, आन्द्रे रसेल, खैरी पिर्रे ।